» व्यवसायिकको समस्या समाधानको बाटो बनाउँन मेरो उम्मेदवारी:श्रेष्ठ
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १०:३६
मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघको यही कात्तिक ७ देखि ९ गतेसम्म हुने चुनावमा आगामी कार्यकालका लागि बाणिज्य तर्फ सदस्य पदमा घोषणा गरेको उम्मेद्वारीका विषयमा उनीसंग लोकखबर डटकमका संवाददाता रन्धिर साहले गरेको कुराकानी ।
मउवा संघको अगामी कार्तिक ९ गते हुने निर्वाचनमा वाणिज्यतर्फ सदस्य पदमा विकेशलाल श्रेष्ठले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
उनी हेटौँडा १ चौकीटोलमा विनय एण्ड विकेश सप्लायर्स संचालन हुन । उनले सुरुवाती व्यवसाय, जसबाट व्यवसायिक पहिचान समेत उनको बनेको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । अहिले पनि सोही व्यवसायलाई निरन्तरता दुदै आइ रहेको छ।
तपाईं मउवा संघको चुनावी क्षेत्रमा आउनुको कारण के हो ?
म व्यवसायीहरुको लागि केही न्या गर्ने इक्छा भएको र बिकासको बाटोमा लैजान को लानी मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। मकवानपुर जिल्लामा आर्थिक ठूलो हिस्सा धान्दै आएको निजी क्षेत्रका बिभिन्न व्यवसायीहरु कोभिडले प्रभावित बनेका अवस्थामा बैंकको ब्याजदेखि घरभाडासम्मका कुराले निकै पिरोलेको बताउँछन् ।
व्यवसायीहरुको लागि तपाइले के के गर्नु भएको छ ? र तपाइको योजना के के छ ?
घरभाडा समस्याहरू नगरमा देखिएका सवारी पार्किङ्गको समस्या हटाउनका पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने र व्यवसायहरूलाई समस्या परेका आयकर भन्सार, बैंक, वित्तीय संस्थाहरू सम्बन्धी समस्याहरूमा पनि गहन तरिकाले काम गर्ने समुहकै योजन बनेको बताए । व्यापार व्यवसायको अवस्था, व्यवसायीका चुनौतीका बारेमा छलफल गर्ने र औद्योगिक विकासका लागि विज्ञहरू बोलाएर वाणिज्य संघमा छलफल कार्यक्रम गर्ने योजना बनाईएको विकेशलालको भनाई छ ।
सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गर्ने र व्यापारीको समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा आफ्नो सोचसंग प्यानल कै धारणा मेल खाएकोमा खुसी लागेको बताएका हुन् ।
सहि नेतृत्व गर्नेहरुको प्यानल हो । सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । विश्वास छ सबैको साथ र सहयोग पाउँने छौँ ।